पानीपोखरा र दाङचुमको खानेपानी व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको नजर कहिले पर्ला ? – ebaglung.com
पानीपोखरा र दाङचुमको खानेपानी व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको नजर कहिले पर्ला ?
२०७५ असार २२, शुक्रबार १८:३४	Top News, थप समाचार
प्रशान्त घर्तिमगर, बुर्तिबाङ २०७५ असार २२ । ढोरपाटन नगरपालिका—६, पानीपोखरा र दाङचुमको खानेपानी व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको नजर पुग्न नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । खानेपानी व्यवस्थापनको लागि पटक पटक पहल गर्दा पनि नगरपालिकाले ध्यान नदिएको स्थानीय युवा दलबिर भण्डारीले ईबागलुङलाई बताए ।
पानीपोखरा र दाङचुम दुवै गाउँदेखि पानीको मुहान पनि नजिक छ । तर त्यसलाई ट्याङ्की र धारा निर्माण गरेर शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छ । अहिले सम्म यी दुवै गाउँमा सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट एउटा धारासम्म बन्न सकेको छैन । खानेपानीको व्यवस्थापनमा कसैले पनि ध्यान दिन नसकेपछि पानीपोखराका २५ घरधुरीले आफैले पाइप किनेर ८÷१० घरको बिचमा एउटा पाइपबाट पानीको जोहो गरेका छन् ।
त्यस्तै, करिब १५ घुरधुरी रहेको दलित बस्ती दाङचुममा पनि मुहानबाट सिधै पाइप जोडेर अस्थायी रुपमा खानेपानीको जोहो गरेका छन् । यी दुवै गाउँका स्थानीयहरुले अघिल्लो बर्ष नै मुहान तथा धारा व्यवस्थापनको लागि पहल गरेका थिए । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको आँखा जान नसकेको यी दुवै गाउँलाई नगरपालिकाले समेत उपेक्षा गरेको भण्डारीले गुनासो गरे । कतिपय स्थानमा खानेपानीको राम्रो प्रवन्ध हुँदाहुँदै पनि दोहो¥याएर बजेट परेको तर खानेपानीको स्रोत नजिकै भएर पनि पानीको व्यवस्थित धारा नभएका यी गाउँमा जनप्रतिनीधिको ध्यान नजानु दुखद रहेको उनको भनाइ छ ।
मुहानबाट सिधै पाइप जोडेर पानी ल्याउँदा दुषित पानीको कारण स्थानीयहरुको स्वास्थ्यमा समेत नकरात्मक असर परेको स्थानीय शिक्षक धनबीर भण्डारीले बताए ।
उता, आगामी आर्थिक बर्षमा नगरपालिले खानेपानी व्यस्थापनमा विशेष ध्यान दिने र पानीपोखरा तथा दाङचुमको खानेपानी व्यस्थापनलाई प्राथमितामा राखिने वडाअध्यक्ष जीवनकुरमा पुनले बताए ।
गत असार १० गते नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तुत गरेको ६९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा १ बर्षभित्रमा नगरपालिकाका ९ वटै वडामा खानेपानीको व्यवस्थापन गरिने लक्ष राखिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारत लागु गरे खानेपानीको सहज आपुर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुस्ताङ स्याङबोचेमा भएको ट्रिपर दुर्घटनामा परी १८ जना मजदुरको मृत्यु, १४ जना गम्भीर !
सार्वजनिक सुनुवाईमा नगरबासीका गुनासा थुप्रै : समृद्धि र बिकासका लागी सार्वजनिक सुनुवाइ जरुरी – गैरे